Tobias Billström: Khalad iga dhacay ayuu ahaa inaan ereyadaa ku hadlo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
"Waxaan jeclaan lahaa inaan masuuliyadda halkeeda ka sii wado"
Tobias Billström: Khalad iga dhacay ayuu ahaa inaan ereyadaa ku hadlo
La daabacay torsdag 21 mars 2013 kl 16.20
Wasiirka socdaalka oo maanta hor-tagay xil-dhibaannada baarlamanka ayaa su'aalo laga weeydiiyey ereyadii afkiisa ka soo baxay mar uu wareeysi siiyay war-geeyska maalinlaha ee Dagens Nyhtere horaantii toddobaadkan.
- Inaan sidaa hadalka u dhigo waxay ahayd mid khaldan, waana mid hor-seedday khalad, sida uu wasiirku sheegay. Isagoona ka jawaabayay su'aal uu hor-dhigay af-hayeenka xibigga doogga ee arrimmaha soo-galootiga Mehmet Kaplan.
Tobias Billström ayaa markii ugu horeeysay ka hadlay wareeysigii uu siiyay war-geeyska DN, wixii ka dambeeyay dhaleeceeyn uu dusha uga raray madaxa dawladda Fredrik Reinfeld oo sheegay in ereyadii wasiirku sheegey ahaayeen kuwo khaldan ee wax u dhimey kalsoonidiisii.
- Waxaa muhiimad u arkaa inay ku fadhido inaan raali-gelin ka bixiyo ereyadii aan ku hadlay. Way adag-tahay in laga hadlo dadyoow nagu dhex-nool oo aan muuqan. Waana mid keenaysa in si khaldan loo hadlo ama laga faa'iideysto, waxaana loo baahan yahay in lala tacaalo.
- Waxay ahayd mid aan ku khaldamay inaan doodayda ku bilaabo ka hadalka midabka indhaha iyo timaha. Aad iyo aad ayaan uga xumahay ereyada aan ku hadlay, isagoona intaa raaciyay inuu jecel yahay inuu halkeeda ka sii hayo masuuliyadda wasaaradda socdaalka.
Sideed u aragtaa raali-gelinta wasiirka socdaalka?
Mid aan ku filayn